ဦးရဲမြတ်သူ (Smart City Chief Officers) မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ရဲ့ ဆွေးနွေးမှုကောက်နုတ်ချက်
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ Plan တွေ ဆွဲချင်သလိုဆွဲ ပြောချင်တာတွေပြော ရှိတဲ့ဥပဒေတွေ အကုန်ထုတ် အဲ့ဒီ ဥပဒေတွေ အကုန်လုံး နောက်မှာ အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် အဲဒါတွေ အားလုံးဟာ အလကားပဲ”
ဦးဝင်းမျိုးသူ ( Ecodev Myanmar တည်ထောင်သူနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ) ရဲ့ ဆွေးနွေးကောက်နုတ်ချက်
“ခါးပတ်တစ်ကွင်း လမ်းတစ်စင်း မြန်မာ့အကျိုးစီးပွား အသာရစေဖို့”ခေါင်းစဉ်နဲ့ ယောမင်းကြီးဇရပ် စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲမှ ဦးဝင်းမျိုးသူ ( Ecodev Myanmar တည်ထောင်သူနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ) ရဲ့ ဆွေးနွေးကောက်နုတ်ချက်
မြန်မာ့စီးပွားရေး ... ဘာလဲ? ဘယ်လဲ?" ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ (၇)
“ကားအဟောင်းဈေးကွက်အရ ပြောမယ်ဆိုရင် ဈေးကျဖို့တော့မရှိဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ထပ်သွင်းလို့မှမရတော့တာ လောလောဆယ် ပိတ်ထားတယ်။ လက်ရှိမှာ ကားအရောင်းစင်တာ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက် ပိတ်သွားပြီး နောက်တစ်နှစ်မှာဆိုရင်တော့ အားလုံး ပိတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။”
မြန်မာ့စီးပွားရေး ... ဘာလဲ? ဘယ်လဲ?" ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ (၆)
“နိုင်ငံခြားကို ပို့တဲ့ပစ္စည်းဟာ လွယ်လွယ်ကူကူပို့နိုင်မှ ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေ နိုင်ငံခြားထွက်မှာပေါ့ ကျွန်တော်တို့ ပစ္စည်းတွေ နိုင်ငံခြားထွက်မှ နိုင်ငံခြားက ငွေဝင်မှာပေါ့။”
မြန်မာ့စီးပွားရေး ... ဘာလဲ? ဘယ်လဲ?" ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ (၅)
“ဒီအစိုးရသစ် စတက်တယ်၊ ဟာ ဒါကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့အစိုးရဖြစ်ပြီ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ့။ တစ်ချို့တွေဆို အင်တာဗျူးလုပ်တယ်။ ချက်ချင်းကြီးပဲ စီးပွားရေး တိုးတက်မလို၊ ကျွန်တော်တို့လဲ မျှော်လင့်ခဲ့တာပ။ နဂိုထဲက ပဒေသာပင် မြေကပေါက်သလို ချက်ချင်ကြီး မတိုးတက်တာတော့ သိတယ် အချိန်တစ်ခု ပေးရမယ်လို့ နားလည်တယ်”
မြန်မာ့စီးပွားရေး ... ဘာလဲ? ဘယ်လဲ?" ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ (၄)
“ဒီဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကြီးကို ကျွန်တော်တို့က တန်ခိုးရှင်မဟုတ်ဘူး။”
မြန်မာ့စီးပွားရေး ... ဘာလဲ? ဘယ်လဲ?" ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ (၃)
“တစ်ဖက်မှာလဲ ကျွန်တော်တို့ ငွေတန်ဖိုးကျတဲ့ Effect တွေရှိတယ်၊ တစ်ဖက်မှာလည်း Investors တွေဆိုလည်း ရခိုင်အရေးအခင်း ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မြန်မာပြည်ဆို ကြောက်နေတယ်။”
မြန်မာ့စီးပွားရေး ... ဘာလဲ? ဘယ်လဲ?" ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ (၂)
မြန်မာ့စီးပွားရေး ... ဘာလဲ? ဘယ်လဲ?" ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ (၁)
“ကျွန်တော်တို့ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာငွေဟာ (၁၅) ရာခိုင်နှုန်း တန်ဖိုးကျသွားပါတယ်”
ယောမင်းကြီးဇရပ် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (၃) အပိုင်း(၁၉)
“ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုမှာ အနိုင်ရပါတီရယ်၊ အစိုးရတစ်ရပ်ရယ် အတိုက်အခံပါတီရယ်ရှိရုံနဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဘာတွေ လိုအပ်လဲဆိုတော့ အဲဒီအစိုးရကို လွှတ်တော်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် အင်အားကြီးပြီးတော့ သြဇာရှိတဲ့ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ပေါ်ပေါက်ဖို့လိုတယ်”
ယောမင်းကြီးဇရပ် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (၃) အပိုင်း(၁၈)
“ကျွန်မတို့မျိုးဆက်ဟာ အနစ်နာခံရမယ့် မျိုးဆက်ဖြစ်နေတယ်၊ ကျွန်မတို့ကို ဘာပေးမလဲလေို့ တောင်းနေရမယ့် အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး၊ ကျွန်မတို့ထက် ငယ်တဲ့လူငယ်လေးတွေက ဘာပေးမလဲလို့ တောင်းရမယ့် လူငယ်လေးတွေ ဖြစ်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့က အနစ်နာခံရမယ့် လူငယ်တွေ ဖြစ်သွားပြီ”
ယောမင်းကြီးဇရပ် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (၃) အပိုင်း(၁၇)
“ချမ်းသာတဲ့လူတွေဆီက အလှူငွေတွေ မကောက်ပါနဲ့၊ ချမ်းသာတဲ့လူတွေဆီက အခွန်ကောက်ပါ၊ အလှူငွေကောက်လို့ရှိရင် ချမ်းသာတဲ့လူ တော်တော်များများဟာ နောက်ကွယ်မှာ အကျိုးစီးပွားတွေ ပါလာကြတယ်”
ယောမင်းကြီးဇရပ် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (၃) အပိုင်း(၁၆)
“ကျွန်တော်တို့ ရေရှည်ကို မျှော်ကြည့်တတ်ဖို့ တွေးခေါ်တတ်ဖို့ဆိုတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို မွေးထုတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
ယောမင်းကြီးဇရပ် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (၃) အပိုင်း(၁၅)
“ဘယ်တော့မှာမဆို အမျိုးသမီးမပါဝင်ဘဲ ဆင်းရဲတွင်းက ထွက်လို့မရဘူးဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်”
ယောမင်းကြီးဇရပ် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (၃) အပိုင်း(၁၄)
“တောင်သူလယ်သမားတွေ ဆင်းရဲတွင်းက မလွတ်သ၍ နိုင်ငံတော်ဟာ ဆင်းရဲတွင်းက မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်”